फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकाे छ । निर्वतमान मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि डा. खतिवडाले सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । रोचक आगामी फागुन २० गते अर्थमन्त्रीबाट स्वतः अवकाश पाउने व्यक्तिलाई नै डेढ हप्ताका लागि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी थमाएर ओली सरकारले रमाइलो गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको नियुक्तिमा कसरी कानूनी दुष्कृति देखियो ? यसबारेमा विगतका केही तथ्यहरु हेरौं–
– आम निर्वाचनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि तीन जनजाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । देउवाले गोपाल बस्नेत, कृष्ण पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिएन । राष्ट्रपतिले ती नाम दराजमा थन्क्याएर राखिन् ।
– २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि सोहीसाता प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि अरु नै तीनजनाको नाम पठाए । र, ती नामलाई सदर गर्दै फागुन ८ गते राष्ट्रपति कार्यालयले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र बिमला पौड्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिएको सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।
–संवैधानिक राष्ट्रपतिले पहिलो क्याबिनेटबाट पठाइएको नामलाई रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै देउवाका पालामा सिफारिस भएका बस्नेत, पौडेल र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनीहरुले खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई सांसदको सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेशको माग गरे ।
– फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई तत्काल सपथ नखुवाउनु र २० गते छलफलका लागि आउनु भन्यो ।
–राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ अनुसार मन्त्री बनाइसकेको व्यक्तिलाई फागुन २५ गते मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सपथ ग्रहण गरायो । यसरी फागुन १४ देखि २५ गतेसम्म खतिवडा गैरसंवैधानिक ढंगबाट अर्थमन्त्री बनेको देखिन्छ । फाुगन २३ मा सर्वोच्चले अर्को अन्तरिम आदेश गरेर सपथ ग्रहणको बाटो नखोलिदिएको भए गैरसांसदलाई धारा ७६ अनुसार मन्त्री बनाइएको कानुनी दुष्कृतिले थप समय गुजार्ने निश्चित थियो ।
यसरी नियुक्तिमै संविधान र कानून उल्लंघन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले अब फागुन २० गतेपछि पनि ‘धारा ७६ अनुसार’ नै मन्त्रालय हाँकिरहन्छन् या संविधानलाई सम्मान गर्दै २० गतेअघि नै राजीनामा दिन्छन् ?
नेपाली समाजमा एउटा आहान छ…… निम्तो खाएर मात्र पत्याउनु !